wTVision Miantehitra amin'ny Ultimatte ho an'ny asa fanaovan-tsika mitokona mandritra ny fifidianana any Panama - NAB Show News by Broadcast Beat, Broadcast an'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » wTVision Miantehitra amin'ny Ultimatte ho an'ny asa fanaovan-dresaka azo antoka mandritra ny fifidianana any Panama
wTVision Miantehitra amin'ny Ultimatte ho an'ny asa fanaovan-dresaka azo antoka mandritra ny fifidianana any Panama
Fremont, CA - Aogositra 13, 2019 - Blackmagic Design Androany nanambara fa Ultimatte, ilay tena fanamboarana ny tena fotoana, dia nampiasain'ny wTVision ho an'ny famokarana zava-misy (AR) famokarana sy ny fakana sary feno mandritra ny fandaharana ho an'ny primaries 2019 primaries, ny parlemanta ary ny filoham-pirenena amin'ny TVN. Blackmagic Design'ATEM Televiziona Studio HD mpanova mivantana ny famokarana mivantana sy ny maro hafa koa dia nampiasaina hamoronana mpandalovana azo itokisana izay nampahafantatra ny firenena, mampiseho ny valin'ny tena fotoana, ny vinavina ary ny faran'ny fifidianana amin'ny fomba mifampitohy.
Ny TVN, tambajotra amin'ny fahitalavitra miorina ao Panama, dia niara-niasa tamin'ny wTVision, mpitarika amin'ny fampisehoana kisarisary tena izy, AR ary automatique playout, ho an'ny fifidianana noho ny fanandramana lehibe nataon'i WTVision. Miaraka amin'ireo birao marobe manerana an'izao tontolo izao, ny ekipa miorina ao Kolombia wTVision dia nofidina ho an'ilay tetik'asa ary mila ny fitaterana azy Blackmagic Design fivezivezena avy amin'ny biraony ao Kolombia mankany amin'ny studio any Panama izay nandefasana ny fifidianana.
"Satria mampiasa ny studio an'ny TVN izahay dia tsy maintsy miara-miasa amin'ny fakantsary misy azy ireo sy ny jiro misy azy," hoy i Jorge Kossowski, tompon'andraikitra ara-barotra ho an'ny Colombia amin'ny wTVision. “Tsy nanana fifehezana an'izy ireo izahay, ka nampidininay ny lakilen'ny chroma an'i Ultimatte, izay nahafahanay nanitsy ny aloka sy ny fanitsakitsahana jiro. Nitifitra ny mpanolotra izahay teo anoloan'ny efijery maintso misy fakan-tsary samihafa napetraka, ka ny fakantsary tsirairay no naka ny efijery maitso tamin'ny fomba fijery hafa sy tamin'ny endrika hafa tsy mitovy. Miaraka amin'i Ultimatte, afaka nanamboatra ny loko miloko teo aloha sy ny loko izahay mba hahatonga ny kalitaon'ilay sary mifanentana hatrany amin'ny fandaharana. ”
Raha ny vato no natao ho an'ireo kandidà nirotsaka hofidina tao amin'ny parlemanta, ny WTVision dia naneho ny fandresena tamin'ny fotoana tena izy tamin'ny famoronana sary “fotsy seza” izay mampiseho seza samihafa ao amin'ny mpanao lalàna. Rehefa voafaritra ny mpandresy tamin'ny seza tsirairay dia niova ho ny loko voafaritra manokana miaraka amin'ny antoko mandresy ny sary.
“Te hamorona zavatra vaovao sy mora azon'ny mpijery izahay. Indraindray ny fijerena isa fotsiny dia be dia be sy misafotofoto, noho izany, tamin'ny alàlan'ny fanoharana ny valiny miaraka amin'ireo seza, dia afaka nampiseho zavatra mifampiresaka kokoa isika. Miaraka amin'i Ultimatte, afaka nametaka ny seza teo amin'ny seho virtoaly izahay fa tsy nampiditra sary an-tsaina ary nanjavona na nihemotra, "hoy i Kossowski nanazava.
Toy izany koa, amin'ny fifidianana filoham-pirenena, ny WTVision dia namorona sarintany fotsy an'i Panama, ary rehefa nanangan-tanana ny mpifaninana ny tanàna, dia niova ny kisary eo amin'ny sarintany mampiseho ny tanàna mba hanehoana ny loko manokana mifandraika amin'ny antoko politika mpandresy.
«Rehefa tonga ny valiny dia voatery nataontsika antoka fa 'nandoko' ny tanàna tamin'ny loko mety izahay. Koa satria ny laharana dia 50 isan-jaton'ny tena izy ary virtoaly 50 isan-jatony, dia mametraka marika eny amin'ny tany izahay mba tsy haneken'ny mpanolotra ireo sarisary sarintany izay aseho. Ho an-dohan'ny sarintany, dia manana sary grika fanampiny isika amin'ny endrik'ireo kandidà ary ny isan'ny lasan'izy ireo. Andraikitra lehibe ny hahazoana an'io zo io, indrindra fa rehefa miaina ianao ary tsy afaka manitsy fanitsiana. Ultimatte dia namela ny mpanolotra mba hijoro tsy mihetsika ao ambadiky ny zavatra mangarahara ary mandeha manodidina azy ireo tsy misy olana. "
Ny herin'ny fandefasana ihany koa dia ny ATEM Televiziona Studio HD. wTVision dia nampiasa azy io hanaraha-maso ny zoro samihafa samy hafa ary mifandanja tsara eo anelanelan'ny tifitra tsy misy kapoka. "Ny fifidianana dia tena mavitrika, noho izany ny fidirana amin'ny fampielezam-peo dia mila taratry izany. Ny mora ampiasaina, nefa mampihetsika ATEM Televiziona fahitalavitra HD voaporofo fa io no ilainay sy bebe kokoa. Miaraka amin'ny fijerena maro mifangaro, mora ho anay ny mahita ny sary sy ny sary maoderina, ny efijery maitso ary ny singa hafa rehetra amin'ny toerana iray, ”hoy i Kossowski.
Fandresena ny fantsom-bolan'ny wTVision dia fisamborana Decklink Quad 2 efatra sy karatra fihodinana izay nampiasaina tamin'ny sary an-tsary sy AR. Roa UltraStudio HD Ireo fitaovana fakana sary kely sy ny famerenana dia nampiasaina ihany koa ho fampidirana sy famoahana hampihemorana ny fakantsary mba hialana amin'ny sary, ary roa hafa no nampiasaina ho an'ny overlays grika. Mpanova Micro maro isan-karazany biDirectional SDI /HDMI nozahana hanaraha-maso ny famantarana rehetra sy hitandremana horonantsary, raha ny Teranex Mini SDI Distribution 12G kosa dia ampiasaina amin'ny fanaparitahana ny famahanana fandaharana ho fanaraha-maso.
"Ity dia iray amin'ireo tetikasa mahaliana indrindra izay niasako ary azo antoka fa iray amin'ireo andraikitra lehibe", hoy i Kossowski. "Amin'ny fifidianana dia mila manome fanavaozana ara-potoana ianao raha toa ka mahitsy satria tsy misy fotoana hisian'ny fahadisoana. Nila fitaovam-pitokisana azoko itokisana aho fa tsy hahomby amiko na dia amin'ny fotoana fandefasana aza, ary fantatro fa hahomby amin'ny Blackmagic Design manohana ny asa ataontsika. ”
Sarin'ny vokatra an'ny Ultimatte, ATEM Television Studio HD, DeckLink Quad 2, Micro Converter BiDirectional SDI /HDMI, UltraStudio HD Mini, Teranex Mini SDI Distribution 12G sy ny hafa rehetra Blackmagic Design entana dia hita ao amin'ny www.blackmagicdesign.com/media/images.
WTVision dia mamorona vahaolana fampielezana mivantana mifototra amin'ny fampandrosoana ny rindrambaiko, marika ary famolavolana, fandidiana mivantana ary famokarana loharanon'olombelona manokana. Ny orinasam-pifandraisana dia nanjary iray amin'ireo sary lehibe indrindra sy mpamatsy fanaovana playout automatique noho ny vahaolana mora sy ny fahalalana feno manerana ny sehatra samihafa ao anatin'ny orinasa. Avy amin'ny fampitana fampitana mivantana amin'ny sasany amin'ireo fifaninanana manan-danja indrindra eto an-tany, ny wTVision dia mandray anjara amin'ny fandefasana an'arivony isan-taona ary manana traikefa any amin'ny firenena 60 mihoatra ny. Ny vahaolana amin'ny wTVision ho an'ny fanatanjahantena, fandrakofana ny fifidianana, fampisehoana fialamboly ary fampahalalam-baovao dia miaraka amin'ny rafitra fanaraha-mason'ny tompony, ny safidy ankafizin'ny fahitalavitra lehibe sy mpamokatra manerana an'izao tontolo izao.
Tsarovy ny majika avy amin'ny Frozen II miaraka amin'ny Tutorial Goavam-be Trondro mora indrindra - Desambra 6, 2019
Advocate Aurora Health Campaign / Ny Colonie augmented zava-misy Blackmagic Design blackmagic design ultimatte fampitana injeniera fampitana Engineering Cobalt Encoder fanovana Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Fifidianana ao Panama lahatsoratra famokarana SJGolden - Spears & Arrows The Colonie Ny Colonie - News THE COLONIE / Chicago TV Technology TVU Networks Video injeniera wTvision	2019-08-13
Previous: Podcast Movement 2019 On Exhibit
Next: Ny kolonely dia mahazo loka roa amin'ny telestialy ho an'ny fampielezan-kevitra amin'ny dokambarotra Porsche